တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နာယူမိသော အဆုံးအမ
ပေးထားတဲ့ ကတိ ဖောက်ဖျက်ပြီး ဒီပို့စ်ကို တင်တာကို အိမ်က သိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်မယ်ထင်တာပါပဲ။ ဒီကနေ့ ဒီစာကို အရမ်းရေးချင်လို့ ကျမ အမကို ပေးထားတဲ့ ကတိ ဖျက်လိုက်မိတယ်။
မြန်မာပြည်ကို လွမ်းလွမ်းနဲ့ နေ့တိုင်း ဗမာပြက္ခဒိန်လေးကို ကြည့်ကြည့်နေခဲ့တာ ... ဒီနေ့ဟာ တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ ... တဲ့။
တပို့တွဲလ ထမနဲပွဲ လို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သာမန်လောက်သာ သိခဲ့ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာချိန် ဘာသာရေး သင်တန်းတွေ တက်တော့မှ တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ဟာ သြ၀ါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့ ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။
သြ၀ါဒ ပါတိမောက်ဆိုတာ ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ အဆုံးအမ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ မဟာကရုဏာရှင် မြတ်စွာဘုရားဟာ သတ္တ၀ါတွေကို ရင်ဝယ်သားပမာ သနားတော်မူလှလို့ ဆုံးမ သြ၀ါဒ ပေးခဲ့တာပါ။ သြ၀ါဒပါတိမောက်ဟာ တိုတိုလေးနဲ့ ထိရောက်တဲ့ အဆုံးအမတော် ဖြစ်တာကြောင့် ငယ်စဉ်က စတင် သင်ကြားခဲ့စဉ်ကတည်းက အလွန် နှစ်သက် မြတ်နိုးလို့ အမြဲ ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ... ကျမ ဒီသြ၀ါဒကို လိုက်နာ နိုင်ပါသလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြီး မေးရင်း သုံးသပ်ကြည့်မိတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ... ။ ကျမ အားလုံးကို မလိုက်နာနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လိုက်နာနိုင်အောင်သာ ကြိုးစားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအဆုံးအမတော်တွေကို သိပြီးသားဖြစ်လဲ အထပ်ထပ် ဖတ်၊ အထပ်ထပ်နာ၊ အထပ်ထပ် ပြန်လည် ရေးသားရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးနေမိတာပါ။ ဒီပို့စ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးတဲ့ ပို့စ်လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
တပို့တွဲလပြည့် သြ၀ါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့သိမှတ်ဖွယ်များ
တပို့တွဲလပြည့်နေ့မှာ ဘုရားရှင်တိုင်းဟာ တပည့်သားတို့ကို သြ၀ါဒပေးတော်မူတာကို အကြောင်းပြုပြီး တပို့တွဲလပြည့်ကို သြ၀ါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တပို့တွဲလပြည့်နေ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ...
(၁) ရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့၊
(၂) ရှင်သာရိပုတ္တရာ နဲ့ ရှင်မဟာမောဂွလာန် ဧတဒဂ်ရတဲ့နေ့၊
(၃) အင်္ဂါလေးရပ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ရဟန်းပရိသတ်တို့ အလိုအလျောက် စုဝေးမိတဲ့နေ့၊
(၄) ဘုရားရှင်တိုင်း သြ၀ါဒပါတိမောက် ပြတော် မူသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
သြ၀ါဒပါတိမောက် ပါဠိ၊ မြန်မာ ၂ ဘာသာကို ကျမ ဘလော့မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရေးတဲ့ နေ့ကိုပြန်ရှာဖို့ အချိန်မရတော့လို့ အခုတခါတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဖော်ပြလိုက်ပါမယ်။
1. KHANTI PARAMAM TAPO TI TIKKHĀ,
NA HI PABBA JITO PARUPAGHATI,
Forbearing patience is the highest moral practice,
“Nibbana is Supreme” say the Buddhas.
A bhikkhu does not harm others;
One who harms others is notabhikkhu.
2. SABBAPAPASSA AKARANAM,
To cultivate merit,
To purity one’s mind,
3. ANUPAVADO ANUPAGHATO,
MAT TANNUTA CA BHATTASMIM,
Not to revile, not to do any harm,
To practise restraint in the Fundamental Precepts,
To be moderate in taking food,
To dwell inasecluded place, intent on higher thoughts,
မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ စင်အောင် စိတ်ကိုထား။
ဗုဒ္ဓတိုင်းသာ မိန့်ခဲ့တာ၊ သုံးဖြာဤ စကား။
ခန္တီမူလ မာန်ကိုချ၊ ဒေါသကိုပယ်၊ မေတ္တာလွယ် ... ။
အဲဒီ အဆုံးအမနဲ့ အညီ ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် သတိပေးနေမိတယ်။ တကယ်တမ်းက မလွယ်ပါဘူး။ မကောင်းမှု ရှောင်ဖို့၊ ကောင်းမှုဆောင်ဖို့ စိတ်ကို စင်အောင် ထားဖို့က လွယ်တယ်ပဲ ဆိုပါတော့ ... ။ သည်းခံဖို့၊ မာန်ကိုချဖို့၊ ဒေါသကို ပယ်ပြီး မေတ္တာတရား အမြဲထားနိုင်ဖို့က ထင်သလောက် မလွယ်လှပါဘူး။
ဒီရက်ပိုင်း ကျမ စိတ်တွေပင်ပန်း နောက်ကျိ ရှုပ်ထွေးလွန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် လပြည့်နေ့မှာတော့ န၀င်္ဂဥပုသ် သီလ ဆောက်တည်ပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်အောင် ထားရင်း
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆုံးမ သြ၀ါဒလေးကို ထပ်တလဲလဲ ရွတ်ဖတ်ကာ ကျင့်နိုင်ခဲတဲ့ တရားကို နှုတ်ဖျားကနေ နှလုံးသားထဲ ရောက်အောင် အမြဲ ပွါးများလို့သာ နေမိပါတော့တယ်။
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၈
(ဒီစာကို မနေ့က ရေးပြီးပေမဲ့ အင်တာနက်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေလို့ ဒီကနေ့မှ တင်လိုက်ရပါတယ်။)
ကိုးကား။ ... ။
အခါတော်နေ့များ (မာဂဓီ - သာစည်)
သြ၀ါဒပါတိမောက် ကျောက်စာတော် (ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် - မေတ္တာဗြူဟာအဖွဲ့)
Posted by မေဓာဝီ at 2:34 PM
thaks for you new post.. i come to this site but
2/22/2008 3:11 PM
နာယူမိသော အဆုံးအမနဲ့ တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ဟာ သြ၀ါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့ ကိုမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါမေရေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီpostလေးအတွက် မေ့အိမ်ကခွင့်လွှတ်မှာပါ။
2/23/2008 3:13 PM
2/26/2008 1:54 AM